How much is your business? — Balance Professional Services
သင့်လုပ်ငန်း ဈေးဘယ်လောက်ပေါက်ပါသလဲ ?
သင်စီးပွားရေးသာလုပ်နေတယ် သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ လက်ရှိတန်ကြေးကို သိပါသလား? သင့် ကုန်ပစ္စည်း၊ လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ် (Brand) ဟာ တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိသလဲကော တွက်မိပါသလား? လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးအနေနဲ့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းတန်ဖိုး (Business Valuation) ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကို သိသင့်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းရဲ့ တန်ဖိုးဆိုတာကလည်း လုပ်ငန်းစတင်တုန်းက ကိုယ်ထည့်ဝင်ထားတဲ့ ငွေပမာဏလောက်ကို လက်ရှိငွေပေါက်စျေးပေါ်အခြေခံပြီး စျေးတင်ခေါ်ရတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ Business Valuation တွက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
အချို့က လုပ်ငန်းကို မိသားစုပြဿနာ၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာ ဒါမှမဟုတ် အနားယူချင်လို့ လုပ်ငန်းကို ရောင်းချတဲ့အခါ တန်ဖိုးကိုတွက်ကြပါတယ်။ အချို့က ရှယ်ယာတန်ဖိုးတွေသိချင်လို့ တွက်ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုက ဘယ်လောက်တန်သလဲဆိုတာက အချက်အလက်များစွာပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဥပမာ။ ။လက်ရှိစီးပွားရေး ဈေးကွက်အခြေအနေများ၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ Balance Sheet (လက်ကျန်ရှင်းတမ်း) နောက်ဥပမာတစ်ခုပေးရရင် ကိုယ်နဲ့ ပုံစံတူလုပ်ငန်းတစ်ခု မကြာသေးမီက ရောင်းချထားတယ်ဆိုပါစို့။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ လက်ရှိတန်ဖိုးကို တွက်တဲ့အခါ ရောင်းချထားတဲ့ ပုံစံတူလုပ်ငန်း ရောင်းဈေးနဲ့ ယှဉ်ပြီးတွက်ကြပါတယ်။
Business Valuation ဘယ်လိုတွက်ကြမလဲ
လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ Business Valuation ကိုကိုယ်တိုင်မတွက်သင့်ပါဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းတန်ဖိုးကို ကိုယ်တိုင်တွက်ချင်းက အမေတစ်ယောက်ကို သူ့သား သမီး ဘယ်လောက်တော်လဲ၊ လှသလဲမေးတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ အမေဆိုတာမျိုးက ကိုယ့်သားသမီးကို အတော်ဆုံး၊ အလှဆုံးထင်ကြတဲ့သူတွေ မဟုတ်လား။ အဲဒီလိုပဲ လုပ်ငန်းရှင်ဆိုတာကလည်း ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို အရမ်းတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ ထင်ကြမှာပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် လုပ်ငန်းတန်ဖိုးကိုတွက်တဲ့အခါ တိကျတဲ့အဖြေတစ်ခု ရနိုင်ဖို့အတွက် မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။
အကောင်းဆုံးကတော့ လုပ်ငန်းတန်ဖိုးတွက်တဲ့အခါမှာ တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ ပညာရှင်များကို တွက်ချက်ခိုင်းတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းတန်ဖိုးတွက်တဲ့နေရာမှာ တွက်နည်း (၃) နည်းရှိပါတယ်။
Assets-Based Approaches (ပိုင်ဆိုင်မှုများအပေါ်အခြေခံနည်း)
Earning Value Approaches (ဝင်ငွေပေါ်အခြေခံတွက်ချက်နည်း)
Market Value Approaches (ကာလပေါက်စျေးပေါ်အခြေခံတွက်ချက်နည်း)
(၁) ပထမနည်းက လက်ရှိ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ (Assets) ပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတွက်ချက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာ လုပ်ငန်းရဲ့ စက်ပစ္စည်း၊ ဂိုဒေါင်ထဲကပစ္စည်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ငွေ၊ မြေ အဆောက်အဦး၊ ရရန်အကြွေး၊ အမှတ်တံဆိပ်တန်ဖိုး၊ အောင်ထားသော ကန်ထရိုက်များတန်ဖိုး စသဖြင့်ရှိကြပါတယ်။
ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို တန်ဖိုးဖြတ်ရာမှလည်း (၂)နည်းထပ်ကွဲပြန်တယ်။ လက်ကျန်ရှင်းတမ်းထဲက ပေါက်စျေးကိုယူတဲ့နည်းရယ် အပြင်ပေါက်စျေးကိုယူတဲ့နည်းရယ်ပါ။
ကုမ္ပဏီရဲ့ လက်ကျန်ရှင်းတမ်း (Balance Sheet) ထဲမှာတွက်ချက်ပြီးအတည်ယူထားတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရဲ့ပေါက်စျေးထဲကနေ အကြွေးကိုနုတ်ပြီး အသားတင် တန်ဖိုးကို ယူတဲ့ နည်းကို အပြင်ကာလ ပါးစပ်ပေါက်စျေး အတိုင်း ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရောင်းချလိုက်ရင် ရမယ့်ပမာဏထဲက ပေးစရာရှိတဲ့ အကြွေးကိုနုတ်ပြီး ကျန်တဲ့ အသားတင်တန်ဖိုးကိုယူတဲ့ Liquidation asset-based approach
ဒီနည်းမှာက စက်ပစ္စည်းလို Asset မျိုးတွေကို အပြင်ကာလပေါ် ပေါက်စျေးအပေါ်အခြေခံပြီး တန်ဖိုးဖြတ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပြီ... ဒါက ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို အခြေခံပြီး လုပ်ငန်းတန်ဖိုးတွက်တဲ့နည်းပါ။
(၂) ဒုတိယနည်းကတော့ ကတော့ အနာဂါတ်ကာလမှာ လုပ်ငန်းကနေအမြတ်အစွန်းဘယ်လောက် ရနိုင်သလဲဆိုတဲ့အချက်အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတွက်ချက်ပါတယ်။ အဲလိုတွက်ချက်တဲ့အခါမှာ အရင်နှစ်တွေက ဝင်ခဲ့တဲ့ဝင်ငွေတွေ၊ အမြတ်အစွန်းတွေ၊ ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်တွေ၊ မထင်မှတ်တဲ့ဝင်ငွေ (သို့) ကုန်ကျစရိတ်များ၊ Cash Flow တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီး တွက်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းရဲ့အတိတ်ကအချက်အလက်တွေကိုကြည့်ပြီး အနာဂတ်အလားအလာကိုခန့်မှန်း၊ ပြီးတော့မှ လုပ်ငန်းတန်ဖိုးကို စျေးဖြတ်တဲ့နည်းပါ။ ဒီနည်းမှာတော့ အလားအလာရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာ လက်ကျန်စာရင်းထဲကစျေးနဲ့ ကာလပေါက်စျေးထက်ပိုများနေတတ်ပါတယ်။
(၃)တတိယနည်းဖြစ်တဲ့ Market Value Approach ဆိုတာကတော့ လောလောလက်လက်မှ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ထားတဲ့ ပုံစံတူ လုပ်ငန်းတွေရဲ့ပေါက်စျေးကို ကိုယ်လုပ်ငန်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး တွက်ချက်တာကို ပြောတာပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီနည်းလမ်းကတော့ နှိုင်းယှဉ်စရာလုပ်ငန်းတွေရှိမှသာ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းတန်ဖိုးကို တွက်ချက်တဲ့နေရာမှာ ဒုတိယနည်း ကတော့အသုံး အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ် လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စျေးဖြတ်တဲ့အခါ တွက်နည်းတစ်ခုတည်း တွက်တာထက် (၂) နည်း၊ (၃) နည်းလောက်နဲ့တွက်တာက အနီးစပ်ဆုံးတန်ဖိုးကို မှန်မှန်ကန်ကန်ရနိုင်မှာပါ။
ဘာလို့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ ပေါက်စျေးတန်ဖိုးကို သိထားသင့်တာလဲ?
သိထားတော့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးတွေကို ကောင်းကောင်းနားလည်မယ်၊ တန်ဖိုးထားတတ်မယ်။ ဒီနေရာမှာ လုပ်ငန်းရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးတွေကို ခန့်မှန်းခြေမဟုတ်ပဲ တိတိကျကျသိဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လုပ်ငန်းထဲကို ငွေဘယ်လောက်ထပ်ထည့်ရမလဲ၊ လုပ်ငန်းကိုရောင်းချမယ်ဆိုရင်လဲ ကိုယ့်အတွက်အမြတ်ကျန်အောင် တန်ဖိုးဘယ်လောက်နဲ့ ရောင်းချရမလဲဆိုတာတွေ တွက်တဲ့အခါမှာ Business Valuation ကအများကြီးအရေးပါပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းကတော့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းဘယ်လောက်တန်တယ်ဆိုတာ ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ သိမှာပါပဲ။ လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေ၊ ငွေစာရင်းတွေကို ကြည့်ပြီးအကြမ်းအားဖြင့် တွက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှန်တကယ်တန်ဖိုးကို သိဖို့အတွက်တော့ အထက်ကဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ တွက်ချက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းရဲ့ အမှန်တကယ်တန်ဖိုးကို သိရှိခြင်းကလုပ်ငန်း ရောင်းချတဲ့အချိန်မှာ အများကြီးအားသာချက်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လုပ်ငန်းကို မရောင်းချခင် တန်ဖိုးအမှန်ကိုသိထားခြင်းက ကိုယ့်လုပ်ငန်းတန်ဖိုး တက်လာနိုင်အောင်အများကြီး ပြင်ဆင်ချိန်ရပါတယ်။
အချုပ်အနေနဲ့ ပြောရင်တော့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့တန်ဖိုးကို အမှန်တကယ်သိရပြီဆိုရင် နောက်နှစ်တွေမှာ တန်ဖိုးပိုတတ်ရန်အတွက် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ နှစ်စဉ်အချိန်တစ်ခုပေးပြီး အရင်နှစ်က တိုးတက်နှုန်းတွေ၊ ဝင်ငွေတွေ၊ အရှုံးအမြတ်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ပြင်သင့်တာပြင်ဆင် ရပါမယ်။ လုပ်ငန်းရှင်တိုင်း ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ အမှန်တကယ်တန်ဖိုးကို သိထားခြင်းက ပြိုင်ဘက်တွေထက် နှာတဖျားသာစေနိုင်ပါတယ်။
ထက်ခိုင် (Business Development), ရဲရင့် (Client Success Officer)